5 အမ်စတာဒမ်အားဖြင့်ရထား မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5အမ်စတာဒမ်အားဖြင့်ရထား မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
အမ်စတာဒမ်အလည်အပတ်ခရီးတစ်ခုခမ်းနားသောမြို့ဖြစ်၏. ရှိသည် မြင်လုပ်ဖို့သိပ် ဤနေရာတွင်သင်ဖြစ်နိုင်ပျင်းရဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟု. သို့သျောလညျး, ကတုန်းပဲအမှုအရာထရောမွှေဖို့အကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်. အမ်စတာဒမ်တော်တော်များများအံ့သြဖွယ်နေ့ကခရီးစဉ်များအဘို့ကြီးစွာသော Starting Point သို့ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
ဒါကြောင့်, သငျသညျအမ်စတာဒမ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်အချို့ကိုအပေါ်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သည်လက်ျာရာအရပျကိုရှေးခယျြဖို့ရှိသည်. ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်သင်တို့အမ်စတာဒမ်ကနေယူလို့ရပါတယ်ထိပ်ဆုံးငါးတစ်နေ့တာခရီးစဉ်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်. လည်း, အကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျအပျေါလိုအပျသအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုပေးတော်မူမည်နှင့်ဤအရပ်တို့ကိုရောက်ရှိရန်မည်ကဲ့သို့ ရထားနဲ့. အဆိုပါအပိုင်းအစ၏အဆုံးအားဖြင့်, သင်အမ်စတာဒမ်ကနေတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စွန့်စားမှုစတင်ရန်လိုအပ်သမျှရပါလိမ့်မယ်!
1. လန်ဒန်: အမ်စတာဒမ်ကနေဒီအလွန်အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ!
အမ်စတာဒမ်ကနေတစ်ရက်ခရီးစဉ်အပေါ်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ, အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဘာမှအဘို့လူအများစုဘေးဖယ်. အဘယ်အရာကိုစိတ်ထဲမှကြွလာနယ်သာလန်နိုင်ငံမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, နှင့် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမဏီ. သို့သျောလညျး, သူတို့မရှိသလောက်လန်ဒန်ကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်, ဤသူသည်သင်တို့ကြာနိုင်ပါတယ်အမ်စတာဒမ်ကနေအလွန်အကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဘယ်ကြောင့်? ဤသည်နေ့ရက်ခရီးစဉ်မကြာခဏသတိမမူကြောင့်ကြောင်း. အဲဒီအကြောင်းကြောင့်, သင်တစ်ဦးရှိနိုင်ပါသည် ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကို များလွန်းလှည့်ခရီးသည်များ၏လုပ်ရတဲ့မပါဘဲ သင့်ရဲ့အာကာသ crowding.
ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်, လန်ဒန်မြင်လုပ်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမှုအရာတွေအများကြီးနဲ့အကြီးအကျယ်မြို့ဖြစ်၏. Plus အား, ဒါဟာသမိုင်းနှင့်အံ့ဘွယ်သောဗိသုကာနှင့်ပြည့်ဝ၏. ကြောင်းအပေါငျးတို့သမရခဲ့လျှင်, သငျသညျလည်းအောက်သွားတော်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ် ကျြောစောသော အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား.
သငျသညျသှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, ဤနေရာတွင်သင်အပေါ်လိုအပ်ပါတယ်အနည်းငယ်အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည် ရထားစီးနင်း. ဒါဟာရထားကနေတဆင့်လန်ဒန်ရောက်ရှိဖို့န်းကျင်လေးနာရီကြာ. ဒါဟာနည်းနည်းပိုရှည်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လူအတော်များများအမ်စတာဒမ်ကနေအညီအမျှဝေးလံသောဒေသများသို့ခရီးသွားလာအဖြစ်, ဒါဟာဖြစ်နိုင်ထက်ပို. သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးအစောပိုင်းစတင်နှောင်းပိုင်းကပြန်လာဖြစ်ပါတယ်, သငျတို့သလန်ဒန်မြို့တစ်ခုလုံးကိုတစ်ရက်ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်.
2. အသုံး: အဆိုပါ Fairy Tales စတင်အဘယ်မှာရှိ
ငါတို့ရှိသမျှသည်အမ်စတာဒမ်၏ဂုဏ်အသရေသည်အဓိကအားဖြင့်ယင်း၏တူးမြောင်းများနှင့်ဗိသုကာတည်ရှိသည်ကြောင်းသိ. သို့သျောလညျး, သင်၌ရှိသမျှသော Bruges ရှိကွောငျးသိရခဲ့ဘူး, ဘယ်လ်ဂျီယံ? နောက်ဆုံးတော့, ဒါကြောင့်သူတို့ကမြောက်ကိုရီးယား၏ဗင်းနစ်ကိုခေါ် Bruges ဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်အမ်စတာဒမ်!
ပိုကဘာလဲ, Bruges ကြောင့်အားလုံးရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မသာ နတ်သမီးပုံပြင် ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်မြို့ရွာ. အမ်စတာဒမ်ကနေသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာခရီးစဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်၏အဲဒီမှာတစ်ခုခရီးစဉ်စေသည်.
သငျသညျ Bruges သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်အလှဆုံးအလယ်ခေတ်အဆောက်အဦးအချို့မှာအံ့ဩဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်. ထိုအလုံအလောက်မပါလျှင်, Bruges အများဆုံးအရသာအချို့ကိုဂုဏ်ယူ လက်ဖြစ်ချောကလက်!
အမ်စတာဒမ်ကနေ Bruges သွားသည့်အခါ, သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင် ရထားသွားပါ. မြေတပြင်လုံးခရီးစဉ်ကအရမ်းစျေးပေါဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့မှော်မြို့ရောက်ရှိဖို့လျော့နည်းသုံးနာရီထက်သင်ယူပါလိမ့်မယ်.
3. အဆိုပါဟိဂ်: ဒါကိုသင်လွတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူး!
အမ်စတာဒမ်ကနေတနေ့လုံးခရီးစဉ်ထဲကသင်တို့အားယူနိုင်ပါသည်, ဟိဂ်လွဲချော်မဖြစ်သင့်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထိုသို့အဓိကအကြောင်းပြချက်ဟိဂ်နယ်သာလန်အတွက်အရေးအပါဆုံးမြို့တသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစအလှဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်.
တဦးတည်းသွားရောက်ခြင်းဘို့မဆိုပိုပြီးအကြောင်းပြချက်မလိုအပ်သင့်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ဟိဂ်အမ်စတာဒမ်ရန်အလွန်နီးစပ်ကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်သင့်. အဆိုပါ ရထားစီးနင်း အလွန်စျေးပေါတစ်နာရီဝန်းကျင်ကြာနှင့်သာ.
အဆိုပါဟိဂ်နယ်သာလန်အစိုးရ၏ထိုင်ခုံဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်အထင်ကြီးအဆောက်အဦတွေအများကြီးကိုမြင်ရဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ. အဆိုပါမြို့ကိုလည်းတရားရေးနိုင်ငံတကာတရားရုံး၏တည်နေရာဖြစ်ပါသည်, အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည် နေရာမြင်ရမည်.
အဆုံးမှာ, သင်ဟိဂ်ရောက်ရှိသည့်အခါ, သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့သေချာပါစေ Madurodam. ဒါဟာအများဆုံးကျိန်းသေကြည်ညိုသငျသညျလိမ့်မည်တစ်သေးသေးလေးပန်းခြံဖြစ်ပါသည်.
The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှဘရပ်ဆဲလ်
The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှ Antwerp
The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှဂျန့်မြို့မှာ
The Hague မြို့တွင်မီးရထားမှ Brugge
4. Cologne: ဂျာမဏီ၏တစ်ဦးမကြာခဏဆိုသလိုလွတ်သွားသောကျောက်မျက်ရတနာ
ဂျာမဏီအများအပြားအံ့သြဖွယ်သောမြို့များနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, မရှိသလောက်လူတွေအမ်စတာဒမ်ကနေသူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာခရီးစဉ်တွေထဲကအဘို့ထိုသူတို့အများစုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး.
သောအမှုဖြစ်ပါသည်သော်လည်း, ဂျာမဏီနေဆဲသွားရောက်လည်ပတ်ထိုက်သည်. သငျသညျ, Cologne သွားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကအထူးသဖြင့်မှန်, အနောက်ဂျာမဏီ၏တစ်ဦးကိုမကြာခဏမေ့လျော့ကျောက်မျက်. အဆိုပါအညီအမျှခမ်းနားရိုင်းမြစ်၏ဘဏ်များအပေါ်ခမ်းနားမြို့သည်မုသာ. ပိုကဘာလဲ, Cologne သည်စီးပွားရေး၏ဗဟိုဖြစ်သည်, ယဉျကြေးမှု, နှင့်အနောက်ဂျာမဏီ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်း.
သင်ဤအံ့ဘွယ်သောမြို့သို့သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျမြတ်နိုးဖို့သမိုင်း၏နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရပါလိမ့်မယ်. မြို့အလွန်စင်တာအတွက်အကြီးအကျယ်ဘုရားကျောင်းမှာတည်ရှိသည်. ဒါဟာအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ် stunning သောနေရာများ သငျသညျဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်ကြည့်ရှုရဦးမည်.
Cologne ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာသာန်းကျင်သုံးနာရီကွာဖြစ်ပါတယ် မီးရထားကနေတဆင့်. ဒါကြောင့်, သငျသညျတစျနေ့ခရီးစဉ်ရှိသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်, သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌မြို့သူမြို့သားရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်.
5. အမ်စတာဒမ်ကနေပဲရစ်ရန်နေ့ခရီးစဉ်: ပြောရမည်မှာရန်အဘယ်အရာကိုပို?
အမ်စတာဒမ်ကနေပဲရစ်ရထားခရီးစဉ်များအလွန်ရှည်လျားဖြစ်ဖို့အသုံးပြု. သို့သျောလညျး, နှောင်းပိုင်းတွင်၏အဖြစ်, သူတို့သာနောက်ဆုံးန်းကျင်သုံးနာရီ, ပဲရစ်သင့်ရဲ့များထဲမှတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီးအောင် အမ်စတာဒမ်ကနေနေ့ကခရီးစဉ်.
ယင်း၏အနုပညာပြတိုက်ကျော်ကြား, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်အစားအစာ, ပဲရစ်မျှမိတ်ဆက်လိုတဦးတည်းဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. နောက်ထပ်က romanticize သို့မဟုတ်သင်သွေးဆောင်နိုင်သောဤကျော်ကြားသောမြို့အကြောင်းကိုဆိုပါတယ်ခံရဖို့အနည်းငယ်သာရှိပါသည်.
အဆိုပါ Eifel မျှော်စင်ကနေဗာဆိုင်းရန်, ပဲရစ်အတူလြှံမပြည့်စုံသည် လည်ပတ်ရန်နေရာများ နှင့်အမှုအရာလုပ်ဖို့. အလင်း၏မြို့လောကဓာတ်လုံးကိုအများဆုံးလူကြိုက်များဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်, ကျနော်တို့အားလုံးအဘယ်ကြောင့်သိပါ. ဒါကြောင့်, ဒါကြောင့်ပဲအကြောင်းကိုဖတ်နေသင်၏အချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့ အဲဒီမှာသွားပါ!
အမ်စတာဒမ်ကနေငါးပါးအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်သည်သင်၏အားလပ်ရက်မမေ့နိုင်သောစေရန်သေချာ, သူတို့ရထားလုံးကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမှီကြောင့်, သင်ဥရောပ၌ရှိကြ၏တဲ့အခါမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့မမျှဆင်ခြေများ!
နှင့်, သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါက, အဆက်အသွယ်အခမဲ့ခံစားရ တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 အမ်စတာဒမ်အားဖြင့်ရထား မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-amsterdam/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Daytrips europetravel ရထားခရီးသွား travelamsterdam travelbelgium eng travelgermany netရာဝတီ travelparis